Iyo Oculus Kutsvaga 2 ndeye inonakidza yekumisikidza kune tether-yemahara, isina waya chaiyo chaiyo (VR) headset kubva kuOculus.
Chekutanga chaive chimwe chedu anodikanwa eVR mahedhifoni sezvo kwaive kusvetuka kusvetuka kumberi kubva kune smartphone VR misoro yemusoro uye huru yepakati-pasi pakati peavo uye anodhura zvakanyanya mahedhifoni. Pasina PC chinodiwa, iyo Quest ichiri kukwanisa kupa yakakwira-kumagumo VR zviitiko zvekutamba nemutengo unodhura.
asi neiyo yekutanga Quest ichiri kuve yakanakisa, ndezvipi zvimwe zvinogona kupihwa neQuest 2? Zvakanaka, makumi mashanu muzana RAM, makumi mashanu muzana mamwe mapikisheni, akawanda ekuvandudza zvigadzirwa, uye mutengo wakanaka wekutanga futi.
Nyaradzo uye dhizaini zvinowedzera
Qualcomm Snapdragon XR2 Platform, 6GB RAM, 64GB / 256GB yemukati yekuchengetedza
Matanhatu matanhatu erusununguko-kuteedzera kuburikidza neakabatanidzwa Oculus Insight tekinoroji
Yakabatanidzwa maspika uye maikorofoni ine positional odhiyo
Chiteshi kana Roomscale kutamba (6.5sqft mashoma)
Chinhu chekutanga chinorova nezve Oculus Kutsvaga 2 dhizaini yayo. Yakaenda ipurasitiki nhema dzekare uye iyo munzvimbo yayo iri chena inokatyamadza pane ese ari mahedhifoni uye nevanoperekedza vanodzora.
Iwo akanakisa maVR mahedhifoni ekutenga: Pamusoro chaiwo echokwadi giya
Best Oculus Kuda mitambo: Zvepamusoro zviitiko zvakakodzera kuve neyakaverengeka yeVR isina waya
Iyo headset pachayo yakavhenekerwa (ne10 muzana, sekureva kwaOculus) uye yakaitwa yakasununguka kupfeka zvakare. Misoro yemusoro yakagadziriswazve, zvichiita kuti zvive nyore kuenzanisa uye kuiwana zvakanaka pamusoro wako.
Izvo zvakatirova isu zvakanyanya, zvakadaro, ndeyekuti dhizaini yeiyo faceplate inotungamira kune yakanyanya kushoma-kubuda ropa kubva kune yekunze nyika iwe paunenge uchitamba, zvichireva chiitiko chakanyanya kunyudza.
Pasi pehodhi, iyo Quest 2 yakave nekukwiridzira futi. Ikozvino mitambo spec iyo inosanganisira Qualcomm's Snapdragon XR2 chikuva, inova yakanakisa nharembozha chipset inowanikwa. Izvi, pamwe ne6GB ye RAM, zvinopa iyo Quest 2 mamwe masimba uye yakawanda mukana wekusimudzira mune ramangwana. Vagadziri vemitambo vachakwanisa kusvina zvakawanda mairi uye nekugadzira zviitiko zvinoramba zvichingoenderana nemitambo yePC VR - pasina chikonzero chekuti iwe utenge PC.
Kune vatakuri vemitambo, iyo Quest 2 inopa magirazi ekusiyanisa magadziriso mubhokisi raunogona kubatisisa kumusoro wemusoro kuti ikupe imwe nzvimbo yekubata. Sezvo isu tichipfeka magirazi, ndiko kukureruka kukuru.
Iyo headset zvakare inowedzera zvekushamwaridzana zvine hushamwari. Kune akawanda akasarudzika zvishongedzo iwe auchakwanisa kutenga kunatsiridza usability - kusanganisira mafaceeplates, tambo kukwidziridzwa (ine yakavakirwa-mukati bhatiri), odhiyo zvishongedzo, uye zvimwe.
Chaizvoizvo iyo Quest 2 yakaverengerwa kuti ive inowanika, iwedzere kushandisa mushandisi, uye ichingori inokwezva.
kuunganidza: Oculus Kutsvaga 2 ongorora mahedhifoni mafoto
Iyo ichiri yakavakirwa pane inozivikanwa dhizaini yepakutanga, asi, iine yakafanana yakavakirwa-mukati, yekumashure-yekupfura masipika iyo inosiya iyo headset waya-isina uye nyore kushandisa. Neimwe nzira, iwe unogona kubaya mune yako wega 3.5mm mahedhifoni kana mahedhifoni kune rumwe ruzivo rwehukama, asi vatauri vanopa bhonasi yemamiriro ekuteerera.
Kunge Chequest yekutanga, iyo Quest 2 inoshandisa tekinoroji yemukati-yekunze yekutevera tekinoroji. Izvi zvinoshandisa akawanda ekunze anotarisana nemakamera ayo anoteedzera kufamba kwemusoro wako nemaoko munyika chaiye.
Paunenge uchibuditsa headset pairi, unokurudzirwa kunyora mepacepace mukamuri ne 'kupenda' mitsara ine mutongi. Uchishandisa Passthrough +, iyo Oculus Kutsvaga 2 inoita kuti iwe uone nharaunda yako pasina kubvisa mahedhifoni. Izvi zvinoreva kuti unogona mepu mukamuri, kuverenga chero zvipingamupinyi zvingave zviri munzira nyore. Iyo mepu inozo shandiswa kune system yevarindi, iyo inoratidza chaiyo madziro kana iwe ukaswedera padhuze kumucheto kwenzvimbo yako chaiye-yepasi nharaunda uye inokuyambira nezve ingangoitika njodzi.
Isu takafarira sisitimu iyi paKutanga kwekutanga uye zvakangonaka pano. Zvinokwanisika kumisikidza nzira yekupfupisa kuti iwe ugone kukanda-bhecha mahedhifoni kuti umise iyo yekufambisa makamera uye uone nyika chaiye uye uye paunenge uchida, zvichireva kuti haufanire kutora headset kuti uone zviri kuitika zvakakukomberedza. Iwe unogona zvakare kushandisa iwo makamera kutamira kune imwe kamuri pasina kana kubvisa iyo headset, kunyangwe Oculus achikurudzira kuti usadaro.
Iyo headset zvakare yakangwara zvakakwana kuti uone kana iwe uchifambisa makamuri uye ichikukurudzira iwe kuti utorezve yako mepu yekuchengetedza kudzivirira chero kukanganisa - iwe unoziva, sekurova firiji kana kubhomba muchirongo chakakosha.
Imwe shanduko diki kune dhizaini zvakare inokutendera iwe kupuruzira mahedhifoni kumusoro zvishoma kudaro, mune yakawanda yeiyo visor maitiro, saka inogona kupotsa yabviswa kunze kwekutarisa pasina kuibvisa zvachose. Zvakanaka kana iwe uchida kutaura kune waunoda, pindura musuwo wepamberi, kana kungo dzosera nzvimbo yako yepasirese. Kwete kuti 2020 anga ari mupurisa mukuru, saka nyika yepasirose ingaite kunge inonakidza.
Zvinonakidza uye zviri nyore kuona
Kurumidza-chinja LCD inoratidzira pani
1,832 x 1,920 nechisarudzo cheziso
72Hz mwero wekuvandudza pakuratidzira; 90Hz rutsigiro runouya
Nemaoko inogadziriswa IPD ine matatu marongero e58, 63 uye 68mm
Sezvaungatarisira, Quest 2 haina kungogadziridzwa iine simba rakawanda pasi pehodhi uye dhizaini dhizaini, zvakare yaive nezviratidziro zvekuona zvakare
Izvo zvinosanganisira kukwidziridzwa mune iyo pixel kuverenga kune anotangisa. Iyo Quest 2 ikozvino inoshandisa yekumhanya-switch switch LCD inoratidzira pani panzvimbo yeiyo OLED inoratidzira pane iyo yekutanga Cheji. Iyo LCD inounza 1,832 x 1,920 pixels paziso (zvichienzaniswa ne1600 x 1440 pixels mune yakapfuura headset), zvichireva mufananidzo wakajeka uye chiitiko chiri nani pane zvese zvauri kuita. Izvo zvakakwirira kupfuura Yakazara HD neziso, izvo zvakada kufanana nekusunga maviri-uye-a-bit flatscreen matai kumeso kwako (kubvisa huremu uye zvinoshanda zvisingaite).
Nesimba rekuwedzera, iyo Oculus Kutsvaga 2 inogona ikozvino kumhanyisa iyo skrini kusvika ku90Hz, iyo inofanirwa kutungamira kune yakajeka chiitiko zvakare. Pakutangisa, zvakadaro, iyi zororo rekuzorora rinogumira kune "kumba" uye "browser" zviitiko, asi zvichawedzerwa mberi sevagadziri vanowedzera rumwe rutsigiro mune ramangwana. Yenguva iyo iri zvimwe 72Hz yakakwira.
Oculus yaedza kuita kuti Quest 2 ive nyore neyakareruka-kushandisa IPD yekugadzirisa system. Kufungidzirwa nechidimbu chakadaro? Inomirira chinzvimbo chekupindirana. Uye, pasina kukahadzika, ibara riri kuyedza kuyera uye nekuita kuti IPD yako ndeyei (er, pamwe ungabvunza nyanzvi yako yemaziso?).
Iyo IPD ikozvino inogona kungogadziriswa mumatanho matatu. Pakati pemusoro we headset uchaona kuti zvinokwanisika kufambisa lenzi mukati nekunze nezvigunwe. Iwe unogona kuita izvi kushandura pakati pematanho matatu akasiyana: 1 (58mm), 2 (63mm) uye 3 (68mm).
Oculus anoti iyi nhanho-nhanho nzira yakaitwa kurerutsa zvinhu uye ruzhinji rwevashandisi richawana rimwe rematanho matatu rinogutsa pane zvavanoda. Izvi zvinogona kunge zviri gripe kune vamwe vashandisi uko yakaderera pane avhareji IPD inoguma mune isingasviki pane inogutsa chiitiko asi. Izvo zvakati isu hatina kumboita nyaya nazvo.
Akangwara bhatiri manejimendi
AA mabhatiri-anofambiswa masimba neane hungwaru simba manejimendi
2-3 maawa maawa bhatiri hupenyu pane headset
Kutengesa USB-C (maawa 2.5)
Iyo Quest 2 zvakare ine vanogadzirisazve vatongi, iine dhizaini iyo yakafuridzirwa neavo vanobva kuKutanga kwekutanga uye iyo Rift S. Oculus akafunga zvakare mashandiro ekuteedzera pano, aine mashoma maLED mukati mezvironda zvekutevera zvinokonzeresa kana hupenyu hwebhatiri ne - sekuona kwatakaona - hapana kukanganisa kwakashata pakutevera ruoko.
Izvo zvinhu zvidiki zvinoita mutsauko pano. Paunenge uchibuditsa headset, vatongi vanongo batidza paunovasimudza, saka hapana chikonzero chekupokana nezvekuyedza kuvabatidza pamurume.
kuunganidza: Oculus Kutsvaga 2 kudzora vatongi
Kune zvakare akangwara kurara pfungwa inoitwa kuona kuti headset haisi kuita zvisina basa kana iwe usiri kuishandisa. Saka maererano nesimba rebhatiri takawana iyo Quest 2 inogona kubata kwakatenderedza maawa matatu ekushandisa isati yada kuchaja, zvinoenderana nezvauri kuita. Mashoma emitero mabasa asingade kufamba kwekutevera - sekutarisa Netflix, semuenzaniso - zvinoreva hupenyu hwakareba.
Iwo anotonga zvirokwazvo anogara kwenguva yakareba kwazvo kupfuura mahedhifoni pachawo, iri bhonasi sezvavanomhanya pamabhatiri eAA uye havagone kungovharirwa mukati kuti vadzorezve.
Kudzoreredza iyo headset kuri nyore zvakakwana zvakadaro. Iyo USB-C inofambiswa, zvichireva kuti iwe unogona kungozvivharira mukati uye uwane kuzara kwakazara mukati memaawa matatu.
Oculus iri kubata iyo Quest 2 segirafu dzvene reVR yemitambo. Haisi chete isina waya-isina uye inoyevedza pamutengo wekubvunza, zvakare ine akati wandei mamwe manomano kumusoro kwayo ruoko.
Oculus anga achishanda pairi ruoko uye minwe yekutevera kwekanguva ikozvino. Icho chaive chiitiko chekuyedza cheKutsvaga uye ikozvino chiri kutumira sekuwedzera kwakanyanya kune iyo Kutsvaga 2. Inoita sechikamu chemenu yekufambisa paunotanga kuisa mahedhifoni uye zvinoshamisa kuti zvine hungwaru kushandisa. Isu tinongotarisira kuti vazhinji vanogadzira vanozvitambira uye isu tinotanga kuona kuteedzera kwemaoko kuchioneka mumitambo.
Kutsvaga 2 kunotsigirawo Oculus Chibatanidza. Nekambo yakakodzera, unogona kukochekera yako Kutsvaga 2 kusvika a PC yemitambo uye ishandise sezvaungaita zvizere-zvine simba PC VR headset. Ehezve, kuita izvi zvinoreva kuti hausisiri waya-isina, asi zvakare zvinoreva kuti iwe unogona kuwana yakawanda yakawanda VR mitambo kuburikidza neOculus Chitoro. Chinongedzo chiri kubuda beta mushure me2020 uye nerutsigiro 90Hz pamitambo yePC VR futi.
Pakatanga iyo Oculus headset, yaive nemazita makumi mashanu chete aripo. Oculus Kutsvaga 50 ine anopfuura mazana maviri emitambo yekutamba. Uye kana iwe uri kushandisa Oculus Link paPC iko kuwana kune heck yakawanda yakawanda futi.
Iyo Facebook yemberi
Nekudaro, pane imwe ingangoita dambudziko rinogona kuisa vamwe vangangove Vanoda 2 vashandisi kure. Munguva pfupi yapfuura, Oculus akazivisa kuti ichaita munguva pfupi inoda vashandisi kuti vave neakaundi Facebook kuitira kuti upinde mukati uye shandisa maOculus zvishandiso. Pfungwa yacho inoita kunge iri yekuita kuti zvive nyore kupinda uye kuwana, kubatana, uye kutamba neshamwari muVR.
Ichi chitsva chinodiwa chinoshanda kune Oculus Kutsvaga 2 vashandisi. Iwe uchazoda Facebook account kana iwe uchida kutamba. Nekudaro, Oculus akatiudza kuti zviri kutarisira zvizere kuti vamwe vanhu vanyore-kuFacebook kuitira kuti vashandise iyo Quest 2 uyezve vasazomboshandisa yavo Facebook account kune chero chimwe chinhu.
Vashandisi vese avo vanoto shanda vachishandisa Facebook zviri pachena vane ruzivo rwakasiyana sezvo Facebook inotarisira kushandisa data rako na:
"Kukuratidza zvemukati zvemukati, zvinosanganisira kushambadza, pane zvigadzirwa zvepaFacebook. Izvi zvinogona kusanganisira kurudziro yeOculus Zviitiko zvaungade, kushambadza nezvemaFacebook maapplication uye matekinoroji, kana kushambadza kubva kune vanogadzira avo eVR apps. "
Iwe haufanire kunetseka nezve chako wega asi, sezvo iwe uchigona kugadzirisa ndiani anogona kuona zita rako chairo uye imwe data paunenge uchitamba online kuburikidza neOculus account marongero.
Ona akanakisa mahedhiyo eVR anowanikwa izvozvi uye uone kuti ndezvipi zvakakunakira iwe